Soogalootiga oo kordha waxa ay horseedeysa dambiyo iyo dilal badan” Siv Jensen. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Soogalootiga oo kordha waxa ay horseedeysa dambiyo iyo dilal badan” Siv Jensen.
Soogalootiga oo kordha waxa ay horseedeysa dambiyo iyo dilal badan” Siv Jensen.
Xibiga Frp ayaa sheegay in ay ka walaacsanyihiin dambiyada iyo dilalka ay geysanayaan dadka soo galootiga ah xili warbixin dhawaan lagu qoray wargeyska nettavisen lagu shaaciyay in ku dhawaad 40 boqolkiiba dilalka ka dhacay Norwey 10-kii sano ee lasoo dhaafay ay geysteen dad ajaanib ah.
Siv Jensen hogaamiyaha xibiga Frp ayaa ku dhaliisha xukuumada Erna Solberg in ay dabooleyso dambiyada ay geysteen dadka soo galootiga ah, iyadoo intaasi ku dartay in tirakoob lagu sameeyay dilalkii ka dhacay Norwey 10-kii sano ee lasoo dhaafay ay muujineyso in 37 boqolkiiba dadka geystay ay yihiin dad aan ku dhalan dalka Norwey.
Norwey waxaa lagu dilay 10-kii sano ee lasoo dhaafay 298 qof, waxaana 88 boqolkiiba dilalkaasi geystay rag, laakiin haddaad eegto dhibbanayaasha, si siman ayaa loo dilay oo boqolkiiba 52 waa rag, halka boqolkiiba 48 ay yihiin dumar sida lagu xusay warbixinta nettavisen oo soo xiganeysa warbixin kasoo baxday booliska Norwey.
Warbixinta boolisku ay soo saareen ayaa lagu sheegay in marka la eego dilalka, si kastaba haku dhacaane ay wataan matalaado badan oo dambiilayaasha, waxaana muddadii u dhaxeysay 2011 ilaa 2020, 29 boqolkiiba dilalka ka dhacay Norwey lagu sheegey in ay fuliyeen dad aan heysan dhalashada Norway, iyadoo haddii lagu daro tirada muwaadiniinta heysta dhalashada Norway ee horey u haystay dhalasho kale ay wader ahaan ka dhigeyso boqolkiiba 37 dadka falkan geystay kuwaasi oo dhamaantood ajaanib ah inkasta oo tiro kaabkaani uusan qeyb ka aheyn dhimashadii ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 22 July 2011.
Arintaasi waxa ay sababtay in hogaamiyaha xisbiga Frp haweeneyda lagu magacaabay Siv Jensen ay ku dhaliisho xukuumada Norwey in ay iska indho tirayaan tirada dadka ajaanibta ah ee dambiyadaasi geystay.
“Dhiirrigelinta dhabta ah ayaa ah inaysan rabin inay ka hadlaan tirooyin aan fiicnayn , Tani waa tiro sare, Waa wax lala yaabo in dowladdu ku guul darreysato inay soo sheegto tan” ayay tiri Siv Jensen.
Waxa ay intaasi ku dartay in soogalootiga oo kordha ay sababi karto dambiyo iyo dilal kala duwan, iyadoo xustay in arintaasi ay keeni karti in ay xitaa caruurto ku lug yeesheen dambiyo waaweyn, maadaama sida ay sheegtay ay jiraan caruur mar hore bilaabay in ay dambiyo ku dhacaan.
Siv Jensen waxa ay tilmaamtay in arintaani yareynteeda aysan u baahneyn lacag iyo dalabyo dheeraad ah balse ay tahay muhiim in talaabooyin adag laga qaado kuwa dambiyada geysta, waxaana muhiim ah bay tiri in dadku ay sameen is dhexgal xoogan, shaqada wadanka oo ay aadaan iyo in ay xooga saaraan barashada luuqada.
Xibiga frp ayaa ah xisbi aad ugu ad adag dadka soo galootiga ah waxaana inta uu ka mid ahaa xukuumada Norwey uu xooga saari jiray hirgelinta go,aano ad adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah.
Warbixintaan waxaan ka soo xiganay nettavisen. Halkaan ka aqiros iyadoo Norske ah.
Previous articleLamaane xabsi ku muteystay dilka wiilkooda oo ay si kama ah isugu caddeeyeen.
Next articleBomb kills 12 security agents in Somalia as politicians wrangle over presidency.